एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड र सामसुङ मोबाइलको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताहरु हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि तथा आई एम एस प्रा.लि बीच एन आई सी एशिया बैंकका ग्राहक महानुभावहरुलाई Samsung Galaxy S10/S10 तथा Samsung Galaxy Note10/10+ को खरिदमा छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ ।
उक्त सम्झौताअनुसार एन आई सी एशिया बैंकका ग्राहक महानुभावहरुले बैंकको डेबिट÷क्रेडिट कार्ड तथा QR कोड प्रयोग गरी Samsung Galaxy S10/S10+ Samsung Galaxy Note10/10+ खरिद गर्दा प्रत्येक खरिदमा १५% वा अधिकतम रु. ३,०००÷ सम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । उक्त सम्झौतापत्र बैंकको तर्फबाट बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सन्तोष कुमार राठीज्यू र सामसुङको नेपालस्थित कार्यालय IBIZ का जनरल म्यानेजर श्री प्रणय रत्न स्थापितज्यूले आदानप्रदान गर्नुभयो । यही मंसीर ३० गतेदेखि माघ १७ गतेसम्म लागू हुन यस योजनाबाट बैंकका ग्राहक महानुभावहरुले अधिकतम लाभ लिन सक्नुहुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।